မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများစီးရီး Injection ကိုမှို China Manufacturer
Ruizhun Precision Metal Co., Ltd. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer Main Mark: Americas , Asia , East Europe , Europe , North Europe , West Europe ထုတ်ကုန်:41% - 50% Cert:ISO/TS16949, ISO14001, ISO9001 ဖေါ်ပြချက်:အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများကာစ် Die,ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ,လူမီနီယမ်အလွိုင်းကာစ် Die
Home > ထုတ်ကုန်များ > ပလပ်စတစ်မှို > Precision ပလတ်စတစ်မှို > မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများစီးရီး Injection ကိုမှို
မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများစီးရီး Injection ကိုမှို
ထွက်နိုင်ရေး: 5million -10 million USD/year
မူလအစရာ: ဂွမ်ဒေါင်းတရုတ် (ပြည်မကြီး),
လက်မှတ်: CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008
HS Code ကို: 8401301000
ခေတ်သစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်, သတ္တုများပုံသွန်းထုတ်လုပ်မှု၏အလွန်ဘုံပုံစံဖြစ်ပါတယ်သေဆုံးလျက်ရှိသည်။ ဘုံဦးသေဆုံး Cast လူမီနီယံအလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ဇင့်အလွိုင်းသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းပါဝင်သည်။
ကာစ် Die: (ဖိအားသတ္တုများပုံသွန်း) တစ်ဦးသတ္တုများပုံသွန်းရရှိရန်ဖိအားအောက်မှာတစ်ဦးမှိုလိုင်နှင့် solidification သို့မြင့်မားသောဖိအားအောက်တွင်အရည်သို့မဟုတ် Semi-အရည်အလွိုင်းများလျင်မြန်စွာဖိပါဝငျသညျ။
ကျယ်ပြန့်အာကာသ, မော်တော်ကား, ဆက်သွယ်ရေး, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, တူရိယာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ... ကြီးမားသောလျှောက်လွှာစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် [Excellent ကအရည်အသွေး, မြင့်သောထိရောက်မှု, စွမ်းအင်ချွေတာရေး, ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး "လိုအပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဟောင်ကောင် Jinrun Co. , Ltd Semi-အစိုင်အခဲသေ-သတ္တုများပုံသွန်းရိုးရာသေ-သတ္တုများပုံသွန်း, မှိုချမှတ်ခြင်း, ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးတန်ဆာများနှင့်အခြားအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုအတွက်အထူးပြုသည်။ ဒါဟာပေါ့ပါး, အရည်အသွေးမြင့်မြင့်ထိရောက်မှု, စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေသေ-သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ဆေးထိုးတန်ဆာထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်တယ်။
တစ်ဦးကစက်ရုံ Qiaotou မြို့, Dongguan စီးတီးတွင်တည်ရှိသည်။ Ruizhun Precision သတ္တု Co. , Ltd ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70000 စတုရန်းမီတာဧရိယာယူထားသော။ ဒါဟာ 800 ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သားများရှိပြီး 150 စီမံခန့်ခွဲမှုန်ထမ်းများနှင့် 101 တင်သွင်း Semi-အစိုင်အခဲသေ-casting မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းသတ္တုများပုံသွန်းစက်စုစုပေါင်းရှိပါတယ်။ စက် 90 စုံနှင့်အတူ high-တိကျဆေးထိုးတန်ဆာ, ကတရုတ်အကြီးဆုံးမဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်း Semi-အစိုင်အခဲသေ-casting လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး High-ထိရောက်မှုနှင့်အဆင့်မြင့်မဂ္ဂနီဆီယမ်အလွိုင်းအပြောင်းအလဲနဲ့န်ဆောင်မှုများ ချ. သေဆုံးသည်။
အဆိုပါ B ကစက်ရုံ Fenggang မြို့, Dongguan စီးတီးတွင်တည်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးမှို Co. , Ltd မှအကြောင်း 10000 စတုရန်းမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအသက် 30 ဆေးထိုးတန်ဆာစက်တွေ, မှိုကုန်ထုတ်လုပ်မှု 10 အလုပ်လုပ်အုပ်စုများနှင့်ဆေးထိုးတန်ဆာအတွေ့အကြုံ 15 နှစ်ပိုင်ဆိုင်သည်။ ဒါဟာပလပ်စတစ်တန်ဆာများနှင့်မှိုချမှတ်ခြင်းအပေါ်အာရုံစိုက်။
ဟောင်ကောင် Jinrun Co. , Ltd နည်းပညာသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပေါ်အလေးပေးနှင့်ထုတ်ကုန်သို့ဖောက်သည်အတွေးအခေါ်များပြောင်းလဲမှ 18 အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုမူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသောခိုင်ခံ့သောနည်းပညာကို R & D အဖွဲ့သည်ရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဗြိတိသျှ BSI certified ရရှိထားပြီး ISO9001 မှတစ်ဆင့်: 2008, ISO14001: 2004, TS16949 အရည်အသွေးကိုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ကုမ္ပဏီသေ-သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ဆေးထိုးတန်ဆာထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးစမ်းသပ်ဖို့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ, ရငျ့ကကျြထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းရှိပါတယ် နှင့်ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
အင်ဂျင်နီယာများဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှငျ့ဆကျသှယျနိုငျကွောငျးကိုသေချာစေရန်, ဖောက်သည်များနှင့်အတူအပေါငျးတို့သဆက်သွယ်ရေးစောင့်ရှောက်ရန်, ဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီလုပ်နိုင်ထုတ်ကုန်ဖောက်သည်ရဲ့ထုတ်ကုန်ရေးဆွဲရန်အဖြစ်မှန်သို့ကုမ္ပဏီ၏ရောင်းအားကလူ။
1. ကျွန်ုပ်မည်သို့ထုတ်ကုန်များအတွက် quotation အများနှင့်တုန့်ပြန်ချက်ရနိုင်မလဲ?
သတ်မှတ်ချက်များ (ပစ္စည်း, မျက်နှာပြင်ကုသမှုသည်းခံစိတ်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်, etc) နှင့်သင်၏ 2D drawings သို့ပေး; သင့်ရဲ့ (MOQ နှင့်နှစ်စဉ်လိုအပ်ချက်) လိုအပ်အရေအတွက် and Logistic လိုအပ်ချက်ဖော်ပြထားခြင်း; 3D ရေးဆွဲအပြည့်အဝထုတ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့အများကြီးကြိုဆိုကြသည်။
2. အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါသည် quotation အရနိုင်မလဲ?
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ချက်ချင်းတုံ့ပြန်ချက်များကိုပြီးတော့ 48 နာရီအတွင်း quotation အပေးနိုငျ
CNC စက်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုခဲအချိန်ကွာခြားချက်ထုတ်ကုန်များနှင့်အရေအတွက်သည်နှင့်အညီ, 1-4wks ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီစာတိုက်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်နှင့်ဖြန့်ဝေအပေါ် Customer များနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုပါလိမ့်မယ်။
1) extrusion မှိုများအတွက် 2-3wks
2) ဦးသေဆုံးသတ္တုများပုံသွန်းမှိုသို့မဟုတ်ပလတ်စတစ်ဆေးထိုးမှိုများအတွက် 4-8wks
3) နေမှုကိုချေဖျက်မှိုများအတွက် 2-3wks
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ပလပ်စတစ်မှို > Precision ပလတ်စတစ်မှို
အီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများအဘို့အပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို
အော်တို Cab ဆက်စပ်ပစ္စည်း Injection ကိုမှို
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှို CD ကိုရှဲလ်အစိတ်အပိုင်းများ
အော်တို shell ကိုစိတျအပိုငျးဆေးထိုးတန်ဆာ
မူလစာမျက်နှာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်စိတ်တိုင်းကျပလတ်စတစ် Injection ကိုမှို
ညီလာခံဖုန်း Shell က Injection ကိုပလတ်စတစ်မှို
အီလက်ထရောနစ်အပိုင်း Injection ကိုပလတ်စတစ်မှို
ကို ABS အစိတ်အပိုင်းများများအတွက်စိတ်တိုင်းကျပလတ်စတစ် Injection ကိုမှိုန်ဆောင်မှု
ပလပ်စတစ် Injection ကိုမှိုအော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများအဘို့အ Casting Die